Estera 2: 1-23
Estera 1 Estera 2 Estera 3
Rehefa afaka izany, nony efa nionona ny fahatezeran'i Ahasoerosy mpanjaka, dia nahatsiaro an'i Vasty sy izay efa nataony izy Ary ny efa nitsarana azy.
Ary aoka ny mpanjaka hanendry olona any amin'ny isan-tokony eran'ny fanjakany rehetra, dia aoka hovorin'ireny ny zazavavy virijina tsara tarehy rehetra ho ato Sosana renivohitra ho ao an-tranom-behivavy amin'ny fehin'i Hegay, tsindranolahin'ny mpanjaka, mpifehy ny vehivavy; Ary aoka homena ny zavatra fidiovany izy;
Ary nisy Jiosy anakiray tany Sosana renivohitra, Mordekay no anarany, zanak'i Jaïra, zanak'i Simey, zanak'i Kisy, avy tamin'ny taranak'i Benjamina,
Koa nony re ny tenin'ny mpanjaka sy ny lalàny, ka voavory tany Sosana renivohitra ny zazavavy maro ho amin'ny fehin'i Hegay, dia mba nentina ho ao an-tranon'ny mpanjaka koa Estera ho amin'ny fehin'i Hegay, mpifehy ny vehivavy.
Ary Mordekay nitsangatsangana isan-andro teo anoloan'ny kianjan'ny tranom-behivavy, mba hahafantarany izay toetran'i Estera sy izay anaovana azy.
Ary nony tonga ny andro hidiran'ny zazavavy tsirairay isan-andro tany amin'i Ahasoerosy mpanjaka, rehefa tapitra taminy ny roa ambin'ny folo volana, araka ny fomba fanomanana ny vehivavy (fa tapitra tamin'izay ny andro fidiovany, dia enim-bolana tamin'ny diloilo nisy miora, Ary enim-bolana tamin'ny zava-manitra sy ny zavatra sasany koa fidiovan'ny vehivavy),
Tamin'ny hariva no nandeha izy, Ary nony maraina dia niverina izy ho ao an-trano faharoa nitoeran'ny vehivavy, hop amin'ny fehin'i Sasegaza, tsindranolahin'ny mpanjaka, mpitandrina ny vaditsindrano; Ary tsy mba niditra tao amin'ny mpanjaka intsony izy, raha tsy tian'ny mpanjaka, ka voatonona ny anarany.
Ary rehefa tonga ny anjara andron'i Estera, zanakavavin'i Abihaila, rahalahin-drain'i Mordekay, izay efa nandray azy ho zanani-vavy, hidirany ao an-tranon'ny mpanjaka, dia tsy nila na inona na inona izy mihoatra noho izay notononin'i Hegay, tsindranolahin'ny mpanjaka, mpitandrina ny vehivavy. Ary Estera nahita fitia teo imason'ny olona rehetra izay nijery azy.
Ary tian'ny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy rehetra Estera, ka nahita fitia sy sitraka teo imasony mihoatra noho ny virijina rehetra izy, ka dia nosatrohany ny satroboninahitry ny fanjakana izy ka nampanjakainy hisolo an'i Vasty.
Ary ny mpanapaka nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanapaka rehetra sy ny mpanompony, dia fanasan'i Estera izany; Ary nanendry andro fifaliana ho an'ny fanjakana rehetra isan-tokony izy sady nanome zavatra araka ny fanomen'ny mpanjaka.
Ary raha nisy virijina novoriana fanindroany, dia nipetraka teo am-bavahadin'ny mpanjaka Mordekay.
Tamin'izany andro izany, raha Mordekay nipetraka teo am-bavahadin'ny mpanjaka, dia tezitra Bigtana sy Taresy, roa lahy isan'ny tsindranolahin'ny mpanjaka, dia ilay mpiambina teo am-baravarana, ka nitady hamono an'i Ahasoerosy mpanjaka izy.
Ary fantatr'i Mordekay izany ka nambarany tamin'i Estera, vadin'ny mpanjaka; dia nambaran'i Estera tamin'ny mpanjaka kosa izany araka ny nampilazain'i Mordekay azy.
Ary rehefa nodinihina izany zavatra izany, dia, indro, marina; ka dia nahantona tamin'ny hazo izy roa lahy; Ary nosoratana tao amin'ny bokin'ny tantara teo anatrehan'ny mpanjaka izany.